Kanada waxay u Heli Kartaa Delta-Driven Wave 4aad ee Faafida COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Kanada waxay u Heli Kartaa Delta-Driven Wave 4aad ee Faafida COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Madaxa Caafimaadka Dadweynaha ee Canada Theresa Tam
Kanada waxay ku jirtaa waqti yar oo aan sugnayn xilligan, inta u dhaxaysa dadka isku dayaya inay tallaallada galaan oo dib loo furo.
Kanada waxay aragtaa koror ku yimid kiisas cusub oo COVID-19 ah.
Heerarka xiriirka bulshada oo dhan ayaa aad ugu kordhaya dadaallada furitaanka ee socda.
Saameynta cudurrada faafa ayaa laga yaabaa inay soo baxdo horraanta Sebtembar.
Kanada Madaxa Sarkaalka Caafimaadka Dadweynaha wuxuu ka digay in waddanku sida muuqata uu yahay bilowgii mawjadda afaraad ee Delta-ka ee masiibada COVID-19.
“Saadaasha muddada dheer ee la cusbooneysiiyay waxay muujineysaa sida dariiqa cudurku u dhici karo horraanta Sebtember. Waxay soo jeedinaysaa inaan ku jirno bilowgii mawjadda afaraad ee ay waddo Delta, laakiin in raadku ku xirnaan doono kororka joogtada ah ee daboolidda tallaalka oo buuxa, iyo waqtiga, xawaaraha iyo baaxadda dib-u-furitaanka, ”ayay Theresa Tam ka tiri shir jaraa’id oo ay ku qabatay Ottawa. .
"Waxaan u malaynayaa inaan hadda ku jirno xoogaa halis ah, oo u dhexeeya dadkan isku dayaya inay soo galaan tallaallada iyo dib u furista," ayay tidhi.
“Sida ugu dhakhsaha badan dheelitirkaas ayaa la tilmaamaa, oo wax badan kuma qaadan doonto fayras aad loo kala qaadi karo, waxaad arki doontaa xaalado kacsan.”
Ka dib toddobaadyo hoos-u-dhac joogto ah oo ku yimid kiisaska cusub ee COVID-19, Kanada waxay aragtaa koror ku yimid kiisas cusub oo COVID-19 ah, kumanaan kun oo cudurro ah ayaa la saadaalinayaa haddii aan xiriiryo la hayn, sida ku cad qaab-dhismeedka qaranka ee ay sii deysay Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee Kanada (PHAC) Jimcihii.
Toddobada maalmood ee celceliska guuritaanka ee 594 xaaladood oo cusub ayaa la soo sheegay maalin kasta (Luulyo 22-28) waxay muujisay koror 39 boqolkiiba toddobaadkii hore, ayay tiri PHAC Khamiistii.
Qaabaynta qaranka oo ay sii deysay PHAC Jimcihii ayaa muujisay halista halista ah ee kala duwanaanshaha Delta ee aadka u faafa uu yahay, iyo halista ah in tallaalka aan la tallaalin uu noqon karo in waddanka lagu rido mawjadda afaraad.
Willis Lewis wuxuu leeyahay,
Ogosto 1, 2021 markay tahay 18:20
Delta maahan Covid 19, mana aha wax ka duwan Covid marka loo eego cudurka Legionnaires ama N1H1 waa. Sheegista in Delta ay tahay Covid waa gabi ahaanba warar been abuur ah. Delta gebi ahaanba wuu ka duwan yahay, waana hargab aad u yar oo dilaa ah. Jooji cabsida khiyaanada leh ee khariban !!!